Wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyey gudoomiyaha baanka dhexe & ku xigeenkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah xilka guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya u magacowday Bashiir Ciise Cali oo si ku-meel-gaar ah xilka u hayay, kadib kulan shalay Golaha wasiirada Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho.
Raysul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa shir guddoominayay kulan uu yeeshay golaha wasiirrada oo lagu ansixiyay guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe Bashiir Ciise Cali iyo ku xigeenkiisa, Maryan Cabdullaahi Yuusuf.
“Aad ayaan ugu riyaaqsanahay go’aanka goluhu ku meelmariyey guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Bangiga dhexe waxa uu astaan u yahay maaraynta dakhliga dowladda iyo daah-furnaantooda, waxaan filayaa in qorshaha dowladda ee abuuritaanka hay’ado dhaqaale oo shaqaynaya oo la’aamini karo ay wax ka tari doonto dadaalka ay Soomaaliya ku dooneyso in ay ku soo celiso sharafteedii” sidaasi ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli.
Bashiir Ciise ayaa xilka si ku-meel gaar ah loogu magacaabay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay kaddib markii ay is-casishay Yusur Abraar muddo yar kaddib markii ay xafiiska qabatay.
Bashiir Ciise Cali ayaa guddoomiye ka noqday bangiga dhexe ee Soomaaliya xilligii dowladdii ku-meel-gaarka ahayd, waana khabiir dhinaca maaliyadda ah.